နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း | White Boy Learning Burmese
မင်္ဂလာပါခင်ဗျား။ ကျွန်တော့်မြန်မာလူမျိုးပရိတ်သတ်တွေအတွက် ကျွန်တော် ဒီဖုစ်တ် မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရေးထားပါတယ်ဗျာ့။ ထားပါတော့ ကိုယ့်ကိုယ်အကြောင်းနည်းနည်းရေးပြပါမယ်။ အခု ကျွန်တော်က တက္ကသိုလ်မှာ Junior (တတိယာနှစ်)ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်တက္ကသိုလ်ရဲ့ အရွယ်က ကြီးလည်းကြီးတယ် ကြီးလည်းမကြီးပါဘူး။ အဲဒီတက္ကသိုလ်မှာလည်း ကျွန်တော်က ဂျာမန်ဘာသာနဲ့စပိန်ဘာသာတက်နေပါတယ်။ (တက္ကသိုလ်ပထမပွဲ့ရဖို့)
ကျွန်တော့်အသက် ၁၀နှစ်လောက်တုန်းက တစ်ပတ်တစ်ခါတွေ့တဲ့ လိုအပ်တဲ့အခြေခံမူလတန်းတက်ကျောင်း အတန်းတွေကိုတက်အားဖြင့် ကျွန်တော် စပိန်ဘာသာကိုသင်ယူတာစပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခြေပြုရတဲ့ဝေါဟာရကို၊ ဘယ်လိုရေတွက်တာကို၊ နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့စကားပုံးတွေကိုလည်း သင်ယူခဲ့ကြပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အဲဒါကိုအကုန်လုံးမြတ်နိုးခဲ့ပါတယ်လေ။ အလယ်တန်းတက်ကျောင်းမှာတော့ စပိန်ဘာသာရဲ့သဒ္ဒါကိုလေ့လာတာစခဲ့ပါတယ်။ သတ္တမတန်းမှ ဒသမတန်းအထိ အိမ်မှာ စိပန်ဘာသာလိုမပြောတဲ့လူတောင်အတွက် ကျွန်တော့်စကားပြောအမှုအရာနဲ့စာရေးအမှုအရာတွေကို အံ့ဩဖြစ်အောင် ကျွန်တော့်အနားယူတဲ့အချိန်မှာ ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ မြန်မာဘာသာ နဲ့ ဂျာမန်ဘာသာအကြောင်းဆွေးနွေးတာစပါမယ်။ ဒီဘာသာစကားနှစ်ခု အတူတကွ သင်ယူတာစတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာက မြန်မာဘာသာကို ဂျာမန်ဘာသာကိုထက် လတစ်ချို့အရှေ့မှစခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျယ်ကျယ်လပြန့်ပြန့် အချိန်အတူလေ့လာတာစပါတယ်။ ကျွန်တော့် အထက်တန်းကျောင်းဒုတိရာနှစ်ရဲ့ အဆုံးနီးမှာ ကျွန်တော့် ဇီဝဗေဒအတန်းမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့် စပိန်ဘာသာလေ့လာခြင်းတွေအကြောင့် ယဉ်ကျေးမှုတွေအကြောင်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်းစားမိတယ်။ ဒါမို့လို့ သူ့ကို ဘယ်ကလာလဲလို့မေးပေးတယ်။ သူက “ဗမာပြည်က”လို့ဖြေတယ်။ ကိုယ့်တို့မြို့မှာနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအကြောင်း နည်းနည်းသိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အကြောင်း ဆိုးဝါးတဲ့ယေဘုယျကောက်ချက်ဆွဲယူခြင်းများစွာပြောဆိုပြခဲ့ပြီ။ Laundromatမှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေမို့လို့ ဒီယေဘုယျကောက်ချက်ဆွဲယူခြင်းတွေ ပြောဆိုဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီ laundromatထဲမှာ “ဗမာ”လူမျိုးတစ်ချို့တွေက သူတို့ရဲ့ ကွမ်းသီး ကြမ်းပြင်ပေါ်ကိုတွေးခဲ့ကြတယ်။ ထိုနောက် အင်္ဂလိပ်လို နဲ့ မြန်မာလို “မြန်မာလူမျိုးတွေ ဘယ်သူမှဝင်မသွားရ”ဆိုတဲ့ သင်္ကေတတစ်ခု စာထည့်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေါ့ အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်သင်္ကေတမို့လို့ ဖို့ဝိန်းမြို့တွေရဲ့ မရှေးဆန်သူအားလုံးက အဲဒီ laundromatရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကို ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီမရှေးဆန်သူတွေက ပိုင်ရှင်တွေက လူမျိုးခွဲခြားရေးဝါဒီတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော့်ကြားရတာက ဒီကွမ်းသီးတွေးတဲ့လူရဲ့အများစုက အစ္စလမ်းဘာသာဝင်ဖြစ်ကြတယ်။ (မသေချာဘူး။ လူတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို အဲ့လို ပြောပြခဲ့တာဘဲနော်။) အဲဒီကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို အစ္စလမ်းဘာသာဝင်ဖြစ်လား မဖြစ်လားဆိုတော့ မေးပေးခဲ့တယ်။ အဲဒါ့ကို “မဖြစ်ဘူးလေ။ ကျွန်မ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပေါ့” ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ခဏခဏသူနဲ့ မြန်မာဥစ္စာတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးပြီ။ တစ်နေ့မှာ ဘယ်လို သူ့နာမည်ရေးထားတာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကိုပြခဲ့တယ်။ မသူဇာ ထိုနောက် အဲဒါမြန်မာလိုရေးတတ်တဲ့တစ်ခုတည်းဖြစ်တာဘဲလို့ကျွန်တော့်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အက္ခရာ အံ့ဩစရာဘဲလို့ကြည့်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်လို့ သူ့မတတ်ခြင်းအကြောင်း ကျွန်တော်မှာကိစ္စလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဆက်လက်ပြီးလတွင်မှာ ဗမာဘာသာကိုသင်ယူအောင် ကျွန်တော် နည်းလမ်းမှမဆိုးကိုကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
တွေ့နိုင်တဲ့စာအုပ်များကိုစုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ (မကောင်းတဲ့ Burmese For Beginnersဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုလည်း ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲ့စာအုပ်တောင် အက္ခရာနဲ့ဝေါဟာရသင်အောင်ကူညီလို့ ကျေးဇူးနည်းနည်းတင်တာပဲ)
လုံးဝနားမလည်ပေမယ့်တောင် မြန်မာသီချင်းတွေကိုနားထောင်ပြီး မြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ကားတွေကို ကြည့်တာကြိုးစားခဲ့တယ်။
မြန်မာလူငယ်များစွာသုံးကြတယ်မို့လို့ Gtalk နဲ့ ooVooလို ချက် programsတွေကို ကျွန်တော့်ဆွေးနွေးကွမ်းကျင်မှုတိုးတက်အောင် သုံးခဲ့ပါတယ်။
လမ်းပေါ်မှာ လုံးဝမခင်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုလာတွေ့ပြီး (ကျွန်တော် အဓမ္မကျင့်သူ မဟုတ်ဘူး ပြောပြတဲ့နောက်… ဟားဟား စတာဘဲ အဲဒါကိုမလုပ်ဘူး။) သူတို့နဲ့ ဆွေးနွေးတယ်။
သုံးနှစ်နောက်ပြီး ကျွန်တော်ဟာ ဒီမှာဘဲ! ကျွန်တော်ဟာ ပြည့်စုံခြင်းရဲ့နေရာမှာ နီးနီးပါးပါးရှိတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော် မြန်မာလိုပြောတာ ဆိုးလည်းသိပ်မဆိုးဘူး။ ဒီဗွီဒီယိုမို့လို့ YouTubeပေါ်မှာ ကျွန်တော် အောင်မြင်မှုနည်းနည်းရပြီ။ အဲဒီဗွီဒီယိုတွင် ကျွန်တော်သီချင်းဆိုပြတာကြောက်တာပေမယ့် လူတစ်ချို့ အံ့ဩဖြစ်ခဲ့ပြီ။ လူများစွာ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လို့ ဒီလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုပြီးလို့ရတာလဲလို့ မေးပေးတယ်ပြီး ကောင်းတဲ့ နဲ့ ဆိုးတဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေရဲ့အများစုဟာ အားလုံးမြင်ကြည့်ဖို့အတွက် အင်တာနက်ပေါ်မှာရှိသေးလို့ထင်ခဲ့တဲ့ကြောင့် အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ လေ့လာခြင်းတွေ ပို့တင်မယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့် အလုပ်ကို ဂုဏ်ယူတယ်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ လုံးဝမခင်တဲ့လူတွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမဲ့ ဒီလောက်ဘယ်တော့မှမတိုးတက်နိုင်တော့ဘူး လို့သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တခြားဘာသာစကားတွေလေ့လာနေတဲ့လူတွေကို အကြံညဏ်နဲ့အကူအညီပေးအောင် ကျွန်တော့် အသိတရားကိုဝေသင့်တယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့တယ်။ (ဒါပေမယ့် ဗမာဘာသာကိုလေ့လာချင်တဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် ဒီ website အသုံးအဝင်ဆုံးမှာဘဲ 😉 ).
2 thoughts on “နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း”
ဗမာဘာသာ နဲ့ မြန်မာ ဘာသာ ဘာကွာသလဲသိလား? question တစ်ခုလို့သဘောထားပြီးဖြေပေးပါ. နောက်ပြီး ( မြန်မာဘာသာကို ဂျာမန်ဘာသာကိုထက် လတစ်ချို့အရှေ့မှစခဲ့ပါတယ်) ဒီအရေးအသားမှားနေတယ်. မြန်မာဘာသာကို ဂျာမန်ဘာသာထက် လတစ်ချို့အရှေ့မှစခဲ့ပါတယ်( ကို) နှစ်ခါထပ်နေတော့ ဆိုလိုရင်းမှားနေတာပေါ့ ဒီလိုမရေးဘဲ ( မြန်မာဘာသာကို ဂျာမန်ဘာသာထက် လအချို့စောသင်ခဲ့တယ်)ဆိုလည်းရတယ်။ဒါကပိုနားလည်လွယ်တယ်။
ဗမာဘာသာ နဲ့ မြန်မာ ဘာသာ ဘာကွာသလဲသိလား?
သိတယ်။ ဗမာစကားက ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ ဘာသာစကားပါ။ မြန်မာစကားကတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဘာသာစကား။